दर्शक क्रोधले निमोठिएका थिए त्यसैले होला कहिले धोतिनिलाइ हान हान........ भन्दै चिच्याउथ्यो त कहिले फलाम बोतल भन्दै गिज्याउथ्यो तर ती चिच्यावटले न गोल रोक्न सक्यो न त गोल नै गर्यो – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
मंसिर २३, २०७६ १८:०३ मा प्रकाशित
मोहन कुमार तामाङ्ग
पोखरा :२३ मङ्सिर २०७६: बिस्तारै सुर्यका किरणहरु सरङ्कोटको डाडाबाट पोखरातिर लम्किरहेका थिए। माछापुच्छ्रे आफ्नो मन्दा मुस्कानसगै आफ्नो छायालाइ फेवातालमा डुबुल्की लगाउन आतुर गर्दै थिए ।। बढ्दै गरेको वयस्क जाडो घामको किरणसग त्यतिकै कहाँ तेर्थ्यो र?? तर पनि मान्छेको जिद्दीसामु उसको केही चल्दैन थियो। यहि भएर होला ती वयस्कसग मान्छेहरु आफ्नो आत्मविश्वासलाई भिडाउदै रंगशाला गेट अगाडि लाइन लाग्दै थियो।। मर्निङ वाक जानुको सट्टा आज रंगशाला कुदेका रैछन धेरै जसो सायद नेपालले जितेको सपनामा देखेर होला उनिहरुलाइ विपना पनि पक्कै हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर टिकट लिन आएका।।
बिस्तारै घामको पावर बढ्दै थियो। जाडोले बिस्तारै आफ्नो सामर्थ्य घटाउन बाध्य थियो।। माछापुच्छ्रेको मन्दा मुस्कानलाई बादलले आफ्नो परिधिभित्र पार्ने जमर्को गरिरहेका बेला पोखरेलीलाई चै पोखरा रंगशालाले तानिरहेका थिए।। मर्निङ वाक नगएकाहरु छिटै खाना खाएर निस्केछन क्य रे गेट अगाडिको लाइन बढ्दै गयो उता रंगशाला भित्रपनि सिटमा दर्शकले आफ्नो अधिकार जमाउन थालेका थिए।। एकछिन पछि मर्निङ वाक गएकाहरु पनि छिटोछिटो खाएर निस्केछन। यी सबैको झम्काभेट लगभग १०-११ बजेतिर नै हुन पुगेछ त्यसैले होला १ बजेबाट सुरु हुने खेलको लागि ११ बजेतिर नै लगभग ८०% जति दर्शकले आफ्नो अधिकार जमाइसकेका थिए।।
ती मध्य धेरै जति दर्शको हातमा नेपालको झन्डा बोक्न आज कुनै राजनीतिक पार्टीले उर्दि लगाउनु परेको थिएन कारण पक्कै देशप्रती माया भन्न कुनै विज्ञ खोज्नु नपर्ला । सायद राष्ट्रियता भाषणमा होइन मनमा हुन्छ भन्ने कुरा आज सबैले प्रमाणित गर्दै थिए नै त्यो सगसगै राष्ट्रियताको खोल ओढेर राजनीति गर्न तम्सेकाहरुलाइ खिसिट्याउरी पनि गरेका कोहिकोहीले पक्कै बुझेका थिए।। दर्शक झन्डामा मात्रै सिमित थिएन नेपालका संगितिक सामाग्री पन्चेबाजा, झ्याली, झ्याम्टा, ढोल अनि सनाई समेत लिएर आएका थिए।
१२ बज्न नपाउदै दर्शक भरिए।। आज व्यवस्थापन एकदमै राम्रो थियो किनकी टिकटमा भएका नम्बरको आधारमा सिटको व्यवस्था गरिएका थिए जुन ६-८००० जनाको लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण कार्य थियो।। खेलाडीहरु मैदानमा प्राक्टिस गरिरहेका थिए। खेलाडी देख्न साथ दर्शकले झ्याली झ्यम्टा बजाउन सुरु गरिहाले सगै नेपाल नेपाल ………… भन्ने नारा पनि घन्किन थाले ।। सायद दर्शकको यो माया खेलाडीको मनमा आत्मविश्वास बनेर पक्कै पसिरहेका थिए होलान।।
खेल सुरु हुने समय भएछ क्य हो खेलाडी मैदान बाहिर गए।। एकछिन पछि सबैको ध्यान भङ्ग हुनेगरी आवाज आयो अब एकैछिनमा नेपाल र भारत बिचमा फाइनल खेल हुँदै छ।।यो सुन्नसाथ फेरि रंगशाला तातियो नेपाल नेपाल ……. भन्ने नाराले ।। नभन्दै एकैछिनमा दुवै देशका खेलाडीको जर्सी नम्बर र नाम भन्न थाले।। जब भारतको खेलाडीको नाम उच्चारण गर्न थाले रंगशाला शान्त भयो मानौ त्यहा कुनै अपराधीको नाम घोषण गर्दै थिए तर मन्जु तामाङ भन्ने माइकको आवाज सबैको कानमा पुगेछ क्य रे सबै एक अर्कामा कानेखुसी गर्न थाले नाम नेपालको भनेको कि भारतको ?? सबैको मौनता तोड्यो।। नाम भारतकै भनेका थिए तर मात्रै पश्चिम बंगाल प्रदेशका एक नेपाली भाषी पनि खेलमा सहभागी थिए।। त्यसपछि खेलाडी मैदान प्रवेश गर्न थाले जब भारत प्रवेश गरे त्यत्रो ६-८ हजार मान्छेको हल्ला शुन्य थियो मानौ त्यहा बोल्न मनाही थ्यो तर जब नेपाली टोलि प्रवेश गरेर रंगशाला लाग्थ्यो उत्सव मनाउन गैरहेका थिए। फेरि नारा सुरु हुन थाल्यो । नेपालको झन्डा फर्फराउन थाले।। नारा त सबैको मुखमै थिए ।
माहोल यस्तो थियो कि कसैले भारत मात्रै भनेको भए ती एक्लो पागल बन्ने थिए आज त्यसैले होला चाहेर पनि कसैले मुख खोल्ने रिक्स लिएन।। सबै हो मा हो थप्दै नेपाल भनिरहेका थिए मानौ भारत भन्यो भने उसको आज जिन्दगी सकिदै छ।।
गेम सुरु हुन लाग्दै गर्दा एकजना अंकलले गोजिबाट नेपालको झण्डा निकाले। नजिकै बसेका अर्का अंकलले झन्डा निकाल्न हात झोलामा हालिसकेका थिए तर छेउमै बसेकि अन्टि सायद उसैकी श्रीमती हुनुपर्छ को बोली फुटेपछी उसले हात झन्डा बिहिन बाहिर लजालु तवरले निकाले मानौ उसले झन्डै ठुलै अपराध गर्न खोजेको थियो। यसबाट बुझन् सकिन्थ्यो कि त्यो अंकलले भारतको झण्डा निकाल्ने लागेको थियो ।
उनिहरुको क्रियाकलाप पछाडिबाट नियालिरहेका मलाइ लाग्यो कस्तो अचम्म रहेछ कहिलेकाही आफ्नो स्वाभिमान नचहादा नचहादै पनि बेच्न पर्ने है ।। तिनको मनमा आज कति पश्चतापको बाढी आयो होला।। चाहान हुदाहुदै पनि आफ्नो राष्ट्रियता देखाउन नपाउदा सायद कसको मन दुख्दैन होला र?? उनीहरु बिचको संवाद अनि अनुहारले ती गजबले बताइरहेका थिए।। तर ती नरमाइलो पललाइ भुलाउन भारतले नेपाललाइ गोल हान्यो। उनीहरुको अनुहार खुशी थिए तर ताली पट्काउने आट दुवैले गरेनन किनकी त्यहा सबैको आक्रोश थियो गोल भएकोमा।। पछाडी बाट “धोतिनिले गोल हान्यो यार ” भन्दै निराशका आवाज आउदै थिए भने रंगशाला स्तब्ध थिए मानौ त्यहा कसैलाइ श्रद्धाञ्जली सभा गर्दै थिए।।
भारतिय खेलाडीहरु खुसी थिए तर तिनको खुसिमा खुसी अझै थप्ने उनीहरुको कोच साथी बाहेक सायद कोहि थिएन त्यहा।।। जब बल भारतको पोस्टतिर जान्थ्यो हुटिङले पोखरा हल्लाउला जस्तो हुन्थ्यो र नेपाल कि नेपाल भनेर नारा गन्किन्थ्यो तर जब नेपालको पोस्टतिर आउथ्यो सबैजना चुपचाप सगै गोल नहोस भनेर प्रार्थन गर्थे।। यसैगरी पहिलो हाफ सकियो।।
हाफ पछी खेल सुरु भयो।। खेलाडी आक्रमक थिए सगै जोसिएका पनि तर खेलाडी भन्दा बढी दर्शक जोसिएका थिए किनकी पहिलो हाफमा नेपालले एक खाएका थिए अब त्यो जसरी पनि फर्काउनु थियो र अर्को थपेर जित सुनिस्चित गर्नु थियो।। हुटिङ झन बढ्दै थियो।। सगै खेलाडी जर्ज अब दर्शकले गर्न थालेका थिए। कोहि त्यो भएन भन्थे कोहि अर्को कोहि के कोहि के भन्दै हुटिङ गर्न भने रोकेकै थिएन मात्रै बलले भारतीय पोस्ट ताक्नु पर्थ्यो।। दर्शकको हुटिङले शक्ति त प्राप्त भयो होला तर गोल गर्न चुके नेपालि खेलाडी ।।
समय बिस्तारै आफ्नै लयमा कुद्दै थिए । त्यसैले होला दर्शक पनि आक्रमक हुँदै थिए तर ती आक्रमक हुटिङ र नेपालको नाराले बलको प्रहारलाइ कहाँ रोक्न सक्थ्यो र? मात्र बोल्ने मात्रै त थियो ।। फेरि नेपालले अर्को गोललाइ रोक्न सकेन फलस्वरूप नेपाल ० मै रहिरहे ।।
दर्शक क्रोधले निमोठिएका थिए त्यसैले होला कहिले धोतिनिलाइ हान हान…….. भन्दै चिच्याउथ्यो त कहिले फलाम बोतल भन्दै गिज्याउथ्यो तर ती चिच्यावटले न गोल रोक्न सक्यो न त गोल नै गर्यो।। बरु उनिहरुलाइ शक्ती मिलेछ क्य हो उल्टै नेपालमाथी प्रहार गर्न थाले।। कोहिकोहीले त नाकाबन्दीमा पेट्रोलको लागि लाइन बसेको सम्झिदै बल अगाडि बढाउ सम्म भन्न भ्याए यो नेपालीले भोगेका भारतको अमानवीय व्यावहारको परिणाम थियो।।
समय बिस्तारै ९० को नजिक नजिक जाँदै थियो अब दर्शकको आवाज मत्थर हुँदै थियो सगै नेपालको झन्डाको उचाइ बिस्तारै घट्दै थियो मानौ उसले बुझ्यो अब मा हार्दै छु भन्ने कुरा ।। दर्शकले बिस्तारै आफ्नो घर सम्झिन थालेका थिए ।। अन्ततः लगभग ८ हजार दर्शकको हुटिङ र सपोर्टले भारतीय खेलाडीको गोल सामु केही लागेन र नेपालले हार व्योहोर्न बाध्य भए।। दर्शक झन्डा गोजिमा हानी सुलुसुलु लजालु अनि केही गुमाएको चिन्तित हुँदै बाहिर निस्के।। आउने बेलाको चमक यति बेला कहाँ पुगेछ कुन्नी ?? सायद फलम बोतल सगै गएछ क्य हो।।
झापा जिल्ला भलिवल प्रतियोगितामा दमक नगरपालिका बिजयी